‘शक्तिशाली’ओलीले पनि सकेनन् गोपाल पराजुलीलाई !::kamananews
‘शक्तिशाली’ओलीले पनि सकेनन् गोपाल पराजुलीलाई !
ओली र प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीशलाई बालुवाटार बोलाए
२९ फागुन,२०७४, काठमाडौं । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड मंगलबार बिहानै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीनिवासभन्दा पश्चिमपटि्ट प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको निवास छ ।
तर, आफूलाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको समस्या सुल्झाउन आफैं पहलकदमी लिने प्रयास गरे । यसमा उनलाई प्रचण्डले पनि केही त गर्नैपर्ने भयो भनेर प्रोत्साहित गरे ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बालुवाटार पुगिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्पर्क गरेर ‘छिमेकीका नाताले यस्तो चिया खान र गफसफ गर्न’ बोलाएको स्रोतले जानकारी दियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘चिया खान’ बोलाएका ठाउँमा प्रधानन्यायाधीश पराजुली आए या आएनन् ? यसबारे अहिलेसम्म कसैले पनि खुलाउन चाहेका छैनन् ।
तर, मंगलबार बिहानै एमाले र माओवादी समर्थक केही बरिष्ठ वकिलका वीचमा एउटा सुलह चल्यो- ‘प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई बोलाएर सर्वोच्च अदालतमा के भएको हो भन्दै प्रश्न गरे । र, समस्या समाधानका लागि राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न पराजुलीलाई सुझावसमेत दिए । जवाफमा प्रधानन्यायाधीशले राजनीनामा नदिने तर विदामा बस्ने जानकारी दिए । तीनजनाबीच यसबारे अनौपचारिक सहमतिजस्तै भयो ।’
वामपन्थी वकिलहरुले अब पराजुली इजलासमा नबस्ने र आजैबाट उनले विदा लिने दाबीसमेत गरे ।
तर, वाम वकिलहरुको दाबी त्यतिबेला गलत सावित भयो, जतिबेला प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले सधैंझैं अदालतमा उपस्थित भएर पेशी तोके । र, उनले सधैंजस्तै नियमितरुपमा अदालती कामकारवाही अगाडि बढाए ।
बरु मंगलबार नयाँ घटनाचाहिँ के भयो भने सोमबार इजलास बहिस्कारको घोषणा गर्ने न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाका लागि कुनै पनि बेञ्च तोकिएन ।
प्रचण्ड र ओलीबीच बालुवाटारमा भएको कुराकानी र कार्यपालिकाबाट सर्वोच्च अदालतको घटनामाथि देखाइएको चासोको प्रतिफल मंगलबार केही पनि निस्किएन ।
बरु चोलेन्द्रले बेञ्च बहिस्कारको घोषणा गर्नु न्यायिक परम्परा विपरीत भएको आवाज उठ्यो र उनीमाथि अदालतको मानहानी गरेको आरोपमा मुद्दा चलाउनेबारे प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले छलफल चलाएको हल्ला मंगलबार दिनभरि नै चल्यो ।
संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले अनलाइनखबरलाई प्रतिक्रिया दिँदै यात चोलेन्द्रलाई दण्डित गरिनुपर्छ, या प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयको नेतृत्व छाड्नुपर्छ भन्ने जिकिर गरे ।
उता अनलाइनखबरलाई सोमबार दिएको अन्तरवार्तामा अर्का कानूनविद अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने अब प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने, अन्यथा संसदको ध्यान आकृष्ट हुने प्रतिक्रिया दिए ।
झट्ट हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा भएको विवाद त्यहाँका न्यायाधीशहरुको आन्तरिकजस्तै देखिन्छ । तर, पार्टीको कोटाका आधारमा न्यायाधीश चुन्ने परिपार्टीसँगै अहिले अदालतमा चलिरहेको द्वन्द्वमा ‘कांग्रेस भर्सेस एमाले’ को प्रतिरुप प्रष्टसित देख्न सकिन्छ ।
एमालेले सर्वोच्च अदालतलाई तर्साउन खोजेको कांग्रेस नेताहरुले खुलेआम बोल्दै आएका छन् । यसबारेमा कांग्रेस सभापति देउवाले पनि बारम्बार बोलिरहेका छन् ।
यो परिस्थितिमा एकथरि मानिसहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध उक्साएर यो परिस्थितिलाई महाअभियोगसम्म लैजान चाहेको कतिपयको विश्लेषण छ ।
पराजुलीको पदावधि सर्वोच्च अदालतमा धेरै छैन, तर उनलाई वीचैमा राजीनामा दिन बाध्य पार्ने, नभए महाअभियोग लगाउन सरकारलाई उक्साउने काम भइरहेको कांग्रेसनिकट वकिलहरुको विश्लेषण छ ।
तर, एमालेनिकट वकिलहरु भने जसरी पनि पराजुलीलाई पदावधि सकिनुअगावै हटाइएको हेर्न इच्छुक देखिन्छन् ।
त्यसो त प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली आम जनमानसमा पनि उत्तिकै अलोकपि्रय छन् । उनीमाथि महाअभियोग नै भए पनि लगाइनुपर्ने आवाज सोसल मिडियामा समेत चर्कैसँग उठ्ने गरेको छ । यसले पराजुलीको अलोकपि्रयताको पारो स्पष्ट पार्छ ।
उता ‘मेडिकल माफिया’हरुका विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका डा. गोविन्द केसीको अभियान पनि अहिले एकसूत्रीय रुपमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीकै विरुद्धमा केन्द्रित भएको छ ।
तर, गोपाल पराजुली र सर्वोच्च अदालतमा उनको टीम कमजोर छैन । उनीहरुलाई नेपाली कांग्रेसको निकै दह्रो ‘ब्याकअप’ रहेको देखिन्छ । त्यसैले शक्तिशाली भनिएका प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिन आग्रह गर्दैमा पराजुलीले टेर्ने छाँटकाँट देखिएको छैन ।’
तर, सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न परिस्थितिबारे प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई पनि सजिलो छैन । सोमबारको घटनापछि मंगलबार केही न्यायाधीशका इजलास दिउँसो अबेरसम्म बस्न सकेका छैनन् । अनलाइनखबर बाट